Niravona ny disadisa tany Ambilobe: “Halefa any Tsiafahy ilay nahavanon-doza”, hoy ny Jly Ravalomanana | NewsMada
Vokatry ny fifampiresahana teo amin’ny vahoakan’Ambilobe sy ireo tompon’andraiki-panjakana miadidy ny fandriampahalemana, niravona ihany ny disadisa, taorian’ilay sakoroka tany an-toerana. Nambaran’ny Seg, ny Jly Ravalomanana Richard fa halefa eny Tsiafahy ilay nahavanon-doza, aorian’ny famotorana atao azy aty an-drenivohitra.
Nentina fiaramanidina nihazo ny Renivohitra, omaly ary hofotorana ao amin’ny toby Ratsimandrava ilay lehilahy antsoina hoe « Body Mena », izay voarohirohy tamina resaka famonoana vehivavy bevohoka fito volana atao hoe Razafimalala Brigitte, 35 taona tao Ambilobe. « Hofotorana eto Antanananrivo io lehilahy voasambotra io ary hatolotra ny Fitsarana, aorian’izay raha mbola karohina kosa ny namany isany nahavita io asa ratsy io », hoy ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimaria (Seg), ny jeneraly Ravalomanana Richard. Nohazavainy fa mbola karohina kosa ilay namany niaraka taminy nahavita io asa ratsy io izay mbola miafina ao ambanivohitr’Ambilobe, amin’izao fotoana izao. Notsindriny tamin’ny fanazavany fa mandeha avokoa ny fikarohana sy ny famotorana rehetra mahakasika ny raharaha. Fantatra araka izany fa jiolahy efa nifonja tao Nosy Be noho ny resaka famonoana olona io lehilahy voasambotra nahavanon-doza io, ny taona 2013. Mbola nifonja tao Ambilobe ihany koa ny tenany, ny taona 2017 noho ny resaka vono olona. Vao tsy ela akory fa ny taona 2018, ny tenany no nigadra noho ny resaka fanolanana niaro famonoana tao Ambilobe ihany.
Nilamina ny toe-draharaha
Taorian’ny savorovoro nitarika ny fahasimban’ny biraon’ny kaomisaria sy ny fiarakodia nipetraka teo an-tokotany tao Ambilobe, ny alahady teo iny, nidina tany an-toerana ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimaria, ny jeneraly Ravalomanana Richard, niaraka tamin’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys nandravona ny disadisa niseho. Nihaino sy nitondra alaolana ihany koa ireo manam-boninahitra mirahalahy tamin’ireo fokonolona. Vokany, navotsotra teo imasom-bahoaka, omaly maraina ihany koa ireo andian-jatovo roapolo mahery voasambotra taorian’ny savorovoro izay nahapotika ny biraon’ny kaomisarian’ny polisy sy nahamaizana fiara telo sy moto iraytao an-toerana. Hita soritra tao anatin’ny fanambarana nataon’ny zandarimaria fa niaiky tsy hamerina ireny fihetsika ireny intsony ireo tanora ireo.
Tsiahivina fa voasambotra tao Antanambao, kaominina ambanivohitr’i Mantaly, distrikan’Ambilobe i Body Mena. Ka rehefa nitodi-doha hiverina niaraka taminy ireo polisy namita iraka no nahazo baiko hivily lalana ho any Ambanja noho ny fisian’ireo vahoaka maro an’isa nikasa hitsena io nahina ho nahavanon-doza io, niomana hamaly faty azy. Nanapa-kevitra namonjy ny kaomisarian’Ambilobe ireo vahoaka tamin’izany ka nanampatra ny hatezerany tamin’ireo fananam-panjakana sy ny polisy niasa tao an-toerana rehefa tsy nahita ilay mpanao ratsy tao amin’ny biraon’ny polisy. Nandritra izany, ilay lehilahy ahina ho nahavanon-doza kosa dia noentina tany Ambanja ary nafindra tany Nosy Be.